Fireside Chat Episode6– Kaplan Myanmar University College
Date: 2019-06-22 - to - 2019-06-22 (1 hour)
Time: 10:00 am - to - 11:00 am (Asia/Yangon)
Fireside Chat Episode 6
Fireside Chat ရဲ့ Episode6ကနေ ပြန်လည်ပြီးတော့ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေကနေ အောင်မြင်နေကြသူတွေနဲ့ အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက် Fireside Chat ပွဲလေးကို ပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်လို့ အားလုံးကိုလည်း လာရောက်ပါဝင်စေချင်ပါတယ်။
ဒီတခါ မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ….
HR consultant, behavior, mindset changing, capacity development trainer and transformational coach တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မရတနာဇော် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ HR Consulting Firms Sector နဲ့ Training and Development Sector က ထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Edify Myanmar HR Consulting Firm ကိုတည်ထောင်ထားသူ Executive Director တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူမှာ Senior Human Resource Consultant အနေနဲ့ပါလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာဆိုရင် Dagon Group of Companies, Myanmar Japan Thilawa Development နဲ့ private companies, public companies နဲ့ associations များကို မဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာကျကျ လုပ်ငန်းတိုးတက်ရေးအတွက် ရေးဆွဲအကြံပေးနေတဲ့အပြင် ၀န်ထမ်းများရဲ့ အရည်အချင်းမြှင့်တင်ရေး၊ အမူအကျင့်တိုးတက်ရေးနဲ့ ပုံစံကျတဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆများပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သင်တန်းပေးနေတဲ့ trainer တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Human Resource Management နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ ဒီပွဲကိုတော့ အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ပြီး လာရောက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေမှာ register လုပ်ပြီး ပါဝင်လို့ရပါတယ်။
Register Link : http://bit.ly/2ZpQM3c
ပွဲကျင်းပမည့် ရက် : ၂၂.၆.၂၀၁၉ ( စနေနေ့ )
ပွဲကျင်းပမည့် အချိန် : နံနက် (၁၀) နာရီမှ (၁၁) နာရီ
ပွဲကျင်းပမည့် နေရာ : Kaplan Myanmar University College No. 6A, Waggi Yeikthar Street, Pyi Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon
09 – 777 686 000, 09 – 777 636 000
Kaplan Myanmar University College No. 6A, Waggi Yeikthar Street, Pyi Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon